/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: အလိမ္မာ စာမှာရိှသည်
“အလိမ္မာ စာမှာရိှသည်” ဟူေသာ စကားကို များေသာအားြဖင့် ြကားဖူးြကသည်။ ဖတ်ဖူးြကသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ စာေပကို ဖတ်၍ အသိဉာဏ်ြကွယ်၀လျက် လိမ္မာေသာသူတို့ ြဖစ်သွားြကသည်ကိုလည်း ေတွ့ြကံုဖူးြကပါမည်။ စာေပကို ဖတ်ေသာ်ြငားလည်း အသိဉာဏ်မတိုးပွားဘဲ ဆုတ်ယုတ်သွားသူတို့ကိုလည်း ေတွ့ြမင်ေကာင်း ေတွ့ြမင်ခဲ့ြကပါမည်။ ြကားဖူးေကာင်း ြကားဖူးခဲ့ြကပါမည်။ ထို့ေြကာင့် စာေပတိုင်းတွင်ရိှေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့သည် လူသားအားလံုးအတွက် လိမ္မာေရးြခား ရိှနိုင်ပါသလား။ စဉ်စားသံုးသပ်ြကည့်ချင်စရာ ေကာင်းပါသည်။ စာေပဟု ဆိုရာ၌ ဗရုတ်သုတ်ခ အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်ေသာ စာေပ၊ ေလးနက်ေသာ ဘ၀အသိအြမင်တို့ကို ေပးနိုင်ေသာစာေပ၊ ဘာသာေရး၊ လူမှုေရး၊ စီးပွားေရး စသည့် အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်ေသာစာေပဟူ၍ စာေပ အမျိုးမျိုး ရိှပါမည်။ ဤေနရာ၌ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်သည်မှာ ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်ေသာ အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်သည့် စာေပတို့ကိုသာလှျင် အဓိကြဖစ်ပါသည်။
စာေပသည် အဆိပ်အေတာက် ကင်းရပါမည်။ ဘာသာေရးစာေပသည် အြခားေသာစာေပတို့ထက်ပို၍ အဆိပ်အေတာက် ကင်းနိုင်ရပါမည်။ အဆိပ်ပင်ကို ေရးေလာင်းေပးလှျင် ထုိအဆိပ်ပင်သည် ြကီးထွားရှင်သန် လာပါမည်။ အဆိပ်ပင်သည် လူတို့အား ေကာင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ပို၍ အကျိုးေပးပါမည်။ ထို့အတူ အဆိပ်အေတာက်မကင်းေသာ ဘာသာေရးစာေပတို့သည်လည်း လူတို့၏ အေတွးအေခါ် အယူအဆတို့ကို အေကာင်းထက် အဆိုးဘက်သို့သာ ဦးတည်ေစပါလိမ့်မည်။ မှန်ကန်ေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ကို သတ်ြဖတ်ပစ်ရာလည်း ေရာက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်။ ထုိ့ေြကာင့် အဆိပ်အေတာက်မကင်းေသာ စာေပတို့ကို ဘာသာေရး စာေရးဆရာတို့အေနြဖင့် လံုး၀ မေရးသားသင့်ပါ။ ဘာသာေရးစာေပတို့ကို ြမတ်နိုး လိုက်စားေနသူတို့ အေနြဖင့်လည်း လံုး၀ မဖတ်သင့်ဟု ထင်ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆံုးကိုးကွယ်ြကသည်ဟု ကမ္ဘာက သိေနြက၏။ ကမ္ဘာက သိေနြကသည့်အတိုင်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသဖို့ လိုပါသည်။ “ပီသဖို့”ဆိုရာ၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားေတာ်နှင့်အညီ ချမှတ်ထားေသာ လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သံုးြခင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ လိုက်နာကျင့်သံုးြခင်းသည် ချမှတ်ထားေသာ လမ်စဉ်တို့ကို သိေနမှ ြဖစ်နိုင်ပါမည်။ ထိုအခါ လမ်းစဉ်တို့ကို သွန်သင်ြပမည့်သူ၊ လမ်းစဉ်ကို မီးေမာင်းထိုးြပမည့်သူတို့ လိုအပ်လာပါမည်။ လိုအပ်ချက်တို့ကို ြဖည့်ဆည်း ေပးနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဆရာေတာ်များ၊ ဘာသာေရးတတ်ကျွမ်းသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘာသာေရး အေတွးအေခါ်တို့ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ေရးသားြကေသာ စာေရးဆရာတို့ပင် ြဖစ်ြကပါ၏။
ယခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စာေပေလာက၌ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်စေသာ စာေစာင်တို့ အများအြပား ေပါ်ထွက် ေနြက၏။ တချို့ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဂျာနယ်တို့သည် ဘာသာေရး သီးသန့်မဟုတ်ြကေသာ်လည်း ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာတို့ ပါ၀င်ထည့်သွင်းတတ်ြက၏။ ပါ၀င်ထည့်သွင်းထားေသာ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာတို့ကိုလည်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားေတာ်နှင့် ညီ မညီ အယ်ဒီတာတို့က သံုးသပ်သင့်ပါသည်။ မိမိတို့ အမှန်တကယ် မသိလှျင်လည်း တတ်ကျွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ ေမးြမန်း၍ မိမိတို့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်တို့၌ ထည့်သံုးသင့်ပါက ထည့်သံုးရပါမည်။ ပယ်သင့်ပါက ပယ်ရပါမည်။ ြပင်ဆင်သင့်ပါက ြပင်ဆင်ရပါမည်။ သို့ြဖစ်မှသာ စစ်မှန်ေသာ ဘာသာေရး၊ အသိပညာတို့ကို တိုးပွားေစေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစာေပတို့ ြဖစ်လာပါမည်။
လူတို့သည် အစွဲအလန်း အလွန်ြကီးမားြကပါသည်။ ေလှနံ ဓါးထစ်၊ တစ်သမတ်တည်း ယူဆတတ်သူ၊ ငါထင်တာမှန်သမှျ လံုး၀မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆတတ်သူတို့ အများအြပား ရိှြကပါသည်။ ထိုသူတို့ထံသုိ့ ဟုိဟာ ဟုတ်နိုး၊ ဒီဟာ ဟုတ်နိုးစသည့် အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ကို ညစ်နွမ်းေစေသာ ေယာင်၀ါး၀ါးစာေပတို့ ေရာက်ရိှသွားပါက အမှန်သည် အမှားြဖစ်၍ အမှားသည် အမှန်ြဖစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ မြဖစ်ခဲ့လှျင်ေသာ်မှ ငါဖတ်ဖူး ြကားဖူးခဲ့သည်က တစ်မျိုး၊ ယခု ဖတ်လိုက်ရသည်က တစ်မျိုး၊ ဘယ်အရာက မှန်ပါလိမ့် စသည်ြဖင့် သံသယကို ထံုမွမ်းထားေသာ အြမင် အေတွးတို့ြဖင့် ဘာသာေရး အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆများ ကျဉ်းေြမာင်း သွားနိုင်ပါသည်။
ထင်ရှားေသာ ဥပမာကို ြပရလှျင် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓစာေပ၌ လံုး၀မပါရိှေသာ “သူရဿတီမယ်ေတာ်”သည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟု ခံယူထားြကသူအချို့က ဗုဒ္ဓ၏ ပိဋကတ်သံုးပံုကို ေစာင့်ေရှာက်ေသာ နတ်သမီးအြဖစ် လက်ခံယူဆေနြက၏။ ထိုအယူအဆအား ကျွန်ေတာ် လံုး၀ ကန့်ကွက်ပါသည်။ ေနာက်တစ်ခုက သာသနာေတာ် အနှစ်ငါးေထာင်တွင် ဘုရားရှင်ထားေတာ်မူခဲ့ေသာ သာသနာ အနှစ် နှစ်ေထာင်ငါ့ရားသည် ကုန်ဆံုးသွားြပီြဖစ်၍ ယခုအခါ သိြကားမင်း ေစာင့်ရှာက်ေသာ သာသနာအနှစ် နှစ်ေထာင့်ငါးရာသာ ကျန်ေတာ့သည်ဟု ယူဆလက်ခံေနြကသူတို့က ရိှေသး၏။ ထိုအရာတို့သည် စာေပေရးသားမှုမှတစ်ဆင့် ေပါ်ေပါက်လာေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ပင် ြဖစ်ပါသည်။
စာေပေရးသားေသာ စာေရးဆရာတို့ ရိှေနပါလှျင် စာေပကို ဖတ်ရှုေနြကေသာ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း ရိှေနပါမည်။ ထိုအခါ စာေရးဆရာဟု အမည်ခံထားသူတို့၌ လံုး၀တာ၀န်ရိှသွားြပီဟု ဆိုရပါမည်။ ဘာေြကာင့် ဤသို့ ေြပာဆိုရပါသနည်းဟု ေမးလာခဲ့လှျင် အေြဖသည် ရှင်းရှင်းေလးပင်ြဖစ်ပါ၏။ “လူအများစုတို့သည် ယံုလွယ်ြကေသာေြကာင့်” ဟု ေြဖရပါလိမ့်မည်။ ယံုလွယ်ြကသူတို့၏ သန္တာန်၌ မှားယွင်းသည့် အေတွးအေခါ်၊ ေယာင်၀ါး၀ါးြဖစ်ေစမည့် အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ ၀င်ေရာက်သွားနိုင်သည့် စာေပတို့ကို ေရးသားြခင်း၊ ေဖာ်ြပြခင်း မြပုသင့်ပါ။ ေရးသားေဖာ်ြပလှျင်လည်း ထိုစာေပသည် “အလိမ္မာ စာမှာရိှသည်”ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားကို ဖျက်ဆီးရာေရာက်သည်။ စာဖတ်ပရိသတ် အေနြဖင့်လည်း ေကျာ်လွှား၍ ဖတ်ရှု့သင့်ပါသည်။
ဘာသာေရးစာေစာင် အမည်ခံထားေသာ မဂ္ဂဇင်းတစ်ချို့၌ပင် ဘာသာေရးနှင့် လံုး၀မပတ်သက်ေသာ ေယာင်၀ါး၀ါးစာေပတို့ ပါလာတတ်၏။ ဥပမာ-သက်သက်လွတ်စားမှ အကျင့်ြမတ်သေယာင်ေယာင်၊ မီးလွတ်၊ ေရလွတ် စားသံုးမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ြဖစ်သေယာင်ေယာင်၊ ဘယ်ရိပ်သာသို့သွား၍ တရားအားထုတ်လိုက်ပါမှ တရားထူးေတွ့သေယာင်ေယာင် စသည့် ေယာင်ေြခာက်ဆယ် အေရးအသားတို့ြဖင့် အမွှမ်းတင် ေရးသားြကသည်တို့ ြဖစ်၏။ ထိုအေရးအသားတို့တွင် “ရဟန္တာ”ဆိုသည်က ပါြပန်ေသး၏။ ရဟန္တာ မရိှဟု မဆိုလိုပါ။ သာသနာေတာ် မကွယ်ေပျာက်သေရွ့ ရဟန္တာ မဆိတ်သုဉ်းေြကာင်း ပိဋကတ်ေတာ်စာေပ၌ အခိုင်အမာ ရိှပါသည်။ သို့ေသာ် အေရးအသားတို့ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရိှ့ဖို့လိုပါသည်။ အထက်၌ ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ေရးသားမှုမျိုးသည် သဒ္ဓါတရားကို ထက်သန်ေစနို်င်ေသာ်လည်း အသိပညာတို့ကိုေတာ့ ထက်သန်ေစနို်င်မည် မဟုတ်ပါ။
အသိပညာ တိုးပွားေစေြကာင်းကို ေရးသားလိုလှျင်လည်း သက်သက်လွတ်စားသံုးမှုေြကာင့် ကိုယ်ခန္ဓာသည် မည်သို့ မည်ပံု ကျန်းမာေရးနှင့် ညီညွတ်သည်၊ မည်သုိ့မည်ပံု အာဟာရနှင့် ညီညွတ်သည် စသြဖင့် ကျန်းမာေရးရှုေထာင့် အသီးသီးမှ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။ ဘာသာေရးရှုေထာင့်တို့တွင်လည်း ထို့အတူ မှန်ကန်ေသာ သံုးသပ်တင်ြပမှုမျိုးတို့ကိုသာ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။
ဘာသာေရးရှုေထာင့်တို့၌ “နိဗ္ဗာန်”သည် မည်ကဲ့သို့သေဘာ အဓိပ္ပါယ်ရိှသည်ကို လည်းေကာင်း၊ “ကံကံ၏ အကျိုးတရား”တို့သည် ဘယ်ပံု၊ ဘယ်ကဲ့သို့ေသာ ဥပမာနှင့် တူသည်ကို လည်းေကာင်း၊ “ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ”သည် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ရိှသည်ကိုလည်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မဆန့်ကျင်ေသာ သံုးသပ် တင်ြပမှုတို့ြဖင့် ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။ ရဟန္တာနှင့် ပတ်သက်လှျင် “ဘယ်ြမို့၊ ဘယ်ေဒသ၌ရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အကျင့်သီလနှင့် အလွန်ြပည့်စံုေနြပီး ရဟန္တာဟု ထင်ရေြကာင်း ၊ ရဟန္တာတမှျြဖစ်ေြကာင်း” စသည်ြဖင့် ေရလာေြမာင်းေပး စကားမျိုး၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစနိုင်ေသာ စကားမျိုးတို့ြဖင့် ေရးသားတင်ြပမှုမျိုး မြပုသင့်ပါ။ ထို့ေြကာင့် စာေပေရးသားေနြကေသာ စာေရးဆရာတို့သည် မိမိတို့ေရးသား တင်ြပမှုသည် အဆိပ်အေတာက် ကင်း မကင်း ဆိုသည်ကို အြမဲတမ်း သတိထား၍ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။
“အများသိလှျင် ဤ ကို ကျွဲ” ဖတ်ချင်ြကေသာ ယခုေခတ်၌ ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်လာလှျင် အမှားအယွင်း ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ ပါ၀င်သည့် ေရးသားမှုတို့ကို ေရးသားတင်ြပြခင်း မြပုလုပ်ပါရန် ထပ်မံ၍ ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် “အားလည်းနာတယ်၊ ေြပာလည်းေြပာချင်ပါတယ်၊ ေြပာလည်းေြပာြပီးသည့် အေနအထားလည်း ြဖစ်သွားပါြပီ ”။
ေနာက်ဆံုးေြပာချင်သည်မှာ “ချွန်ချင်လွန်းလှျင်လည်း တံုးတတ်သည်၊ သွန်သင်လွန်းလှျင်လည်း မုန်းတတ်သည်” ကိုသာ ရင်တွင်းခံယူ ေရးသားလိုက်ရပါသည်။
(ကျွန်ေတာ်၏ ဤေဆာင်းပါးအား ြပန်လည် တင်ြပရြခင်းမှာ ယခု Blog အသိုင်းအ၀ိုင်းနယ်ပယ် တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအား ေစာ်ကားစွာ၊ အြပစ်အနာဆာများြဖင့် ရှုတ်ချေနြကသည်တို့အား ေတွ့ြမင်ေနရြခင်း ၊ အချို့ Blog ေရးသူများ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာေရးအေြကာင်း ေရးေနေသာ်လည်း မိမိေရးသားေသာ စာသည် ဖတ်သူအဖို့ မည်သို့ေသာ လမ်းေြကာင်းများ မှားယွင်းစွာ ေတွးေတာသွားနိုင် ေြကာင်းများကို စာဖတ်သူ၊ Blog ဖတ်သူများ၊ေရးသူများ သတိြပု ဆင်ြခင်သင့်သည်ဟု ထင်ြမင်မိ၍ ယခုတစ်ဖန် ြပန်လည်တင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါသည်၊ မိမိ၏ ေဆာင်းပါးအား ဖတ်ရှု့ကာ သတိြပုဆင်ြခင်နိုင်ြကပါေစ ။ )
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Saturday, May 02, 2009
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... သတိြပု ဆင်ြခင်စရာ အချက် ေတွကို ေဖာ်ြပေပးတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်...ဆက်လက် မှျေ၀ ေပးပါရေစ ခင်ဗျာ...
ကိုလင်းဦးေရးတာ မှန်ပါတယ် အားလံုးဖတ်ြပီး သတိထားနိုင်ပါေစရှင်. မှျေ၀ေပးတာေကျးဇူးပါ.
အဲဒီသူရဿတီတုိ့ သိြကားမင်းသာသနာတုိ့ကို ေန့အိပ်မက်စိတ်ညစ်ေနတာ ေတာ်ေတာ်ြကာြပီ.... တချို့ေတွက အနေန္တာအနန္တငါးပါးမဟုတ်တာကို ကန်ေတာ့မိရင် သရဏဂုံပျက်တယ်ဆုိတာေတာင် မသိဘဲ ေတွ့သမှျ ြပားြပား၀ပ်လက်အုပ်ချီကန်ေတာ့ေနြကေတာ့ ြမန်မာြပည်က ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ရင်ေလးမိတယ်....
ဒါမျိုးေတွ များများဖတ်ရတာ စိတ်ေကျနပ်တယ်....
ဦးေလးလင်းဦးက ချွန်တာလား တံုးတာလား သွန်တာလား မုန်းတာလားဆိုတာ ေသချာေြပာြပပါဗျို့
ကိုလင်းဦး အား ေကျးဇူးအထူးတင်ရိှပါေြကာင်း
စာေရးသူ၏ေစတနာ တာ၀န် စသည်များကို တစ်လံုးမှ နားမလည်ဘဲ လာဖတ်သွားပါေြကာင်း
ကိုလင်းဦးေရ ြပည့်ြပည့့်စံုစံု ေလးကို ေရးထားတာပဲ..
ကေလးတေယာက်ကို ငယ်စဉ်ထဲက စာေပကို ချစ်တဲ့စိတ် တန်ဘိုးထားြပီး ေလ့လာတတ်တဲ့စိတ်ကို ပျုိးေထာင်ေပးနိင်ရင် ေသချာပါတယ် အဲဒီကေလးကို တုတ်ကိုင်ဘို့ မလိုေတာ့ပါဘူး..ခွျင်းချက်ရိှနိင်ေပမယ့်
ဒါဟာ ေယဘူယျ အမှန်တရား ပါပဲ..
စာဖတ်သူအေပါ်မှာ ေစတနာထားတာ ြမင်ရပါတယ် ေကျးဇူးတယ်ပါတယ်ဗျာ...
ေတွးေတွးဆဆ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ .. ။ ေဟာလိုက်ြကတဲ့ ဆရာေတာ်ေတွ ၊ ေရးလိုက်ြကတဲ့ ဆရာေတာ်ေတွ ၊ စာေရးဆရာေတွ လည်း မနည်းေတာ့ဘူး ။ ခုထက်ထိလည်း ြဖစ်ေနြကတုန်းပဲ ။ အေြခခံ သက်၀င်မှုကိုေမ့ထားြကတာကိုး ။ ေမ့ေနတဲ့ ၊ မသိေသးတဲ့လူေတွအတွက် နယ်သားပို့စ်က အေတာ်အရာေရာက်ပါတယ်ဗျာ ။ အဆင်ေြပပါေစ နယ်သားေရ . ။ အေဟးေဟး
ဆင်ြခင်တံုတရား ရှိြကဖို့ စာေရးြခင်း သိက္ခာတရားကို ေထာက်ရှုြပသေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးပါပဲ ကလင်းဦး
ကိုလင်းဦးေဆာင်းပါးကိုဖတ်၍ ဘေေလာ့ဂ်ေရးသူအများစု သတိြပုဆင်ြခင်နိုင်ြကပါေစ။
ကိုလင်းဦးဆိုလိုတဲ့ သေဘာေတွလည်းနားလည်သလို ေြပာချင်တဲ့ ဘေလာ့ကိုလည်း ရိပ်မိပါတယ်။ ဘာသာေရးအတွက် အဆိပ်ေတာက်မြဖစ်ေစဖို့ အေရးြကီးပါတယ်။ အထူးသတိြပုနိုင်ြကပါေစ။
မှတ်စရာရှိတာ မှတ်ယူသွားတယ် ကိုလင်းဦးေရ!!!!!
မှန်တာေတွကိုေြပာရင် မမှန်တဲ့သူေတွက မုန်းြကမယ်။ စာေရးသူဆိုတာ လမ်းြပေပးယုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ြပီး ကိုယ်တိုင်ေဟာေတာ်မူတဲ့ ဘုရားရှင်ေတာ်မှ ကဲ့ရဲ့ြခင်း၊ေစာဒကတက်ြခင်း မကင်းခဲံပါ။ အများအတွက် လမ်းေကာင်း လမ်းမှန်ေရွးနိုင်ရန် ဆက်လက်ေရးသားပါလို့ အားေပးလိုက်ပါတယ်..။
ဖတ်ြကည့်လိုက်တာနဲ့ စာေရးသူရဲ့ ေစတနာကို ေတွ့ေနရတယ်ဗျာ။ တလွှဲေစတနာေတွေပါ့။ ဟဲဟဲ။
ေအာ် ကိုလင်းအူး။ ြပန်ဆံုြကြပန်ပါေပ့ါ။ ဒီလိုစာေတွေရးတုိင်း သတိတရနဲ့ ေြပးလာရတာကိုက ကျေနာ် ကိုလင်းအူးကို ဘယ်ေလာက် ေလးစားတယ်ဆုိတာ ြပတာပါပဲ။ ြဖစ်ရေလဗျာ။ သူရသာတီမယ်ေတာ်ြကီးကိုများ ြပစ်ြပစ်ခါခါ။ ကိုလင်းအူးမေြပာနဲ့။ ေကျးဇူးေတာ်ရှင်ပိဋကတ်သံုးပံု အာဂုံေဆာင် မင်းကွန်းဆရာေတာ်ြကီးေတာင်မှ ဥံုတိဓိညာ၊ ညာတိဓိလို့ သူရသာတီမယ်ေတာ်ကို ေနရာတစ်ခု ေပးခဲ့ေသးတာပဲ။ နှံ့စပ်ေအာင် ေလ့လာစမ်းပါ ကုိယ့်လူရာ။ ဖတ်မှတ်သူေတွ အူေြကာင်ကျားကုန်ပါဦးမယ်။ သက်သက်လွတ်ကိစ္စလဲ ေြပာဦးမယ်ဗျ။ ကျန်းမာေရးရှုေထာင့်က မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဘုရားကေဟာမထားဘူးဆုိြပီး သက်သက်လွတ်ကို ဇွတ်မှိတ်၊ အသားဟင်းေတွချည်း ြကိတ်မေနပါနဲ့။ သက်သက်လွတ်ချည်း မစားခုိင်းတာ ဘာ့ေြကာင့်လဲ ဆုိတာ နက်နက်ေလး ေတွးြကည့်ပါဦး။ ြပီးမှ ေရးေပါ့ေနာ။ ကဲ ဒီမှာတင် ဖုိရမ်ကို စဖွင့်ပါြပီ။ လူတတ်ြကီးများ ၀င်ေရာက် ကျေနာ်များ Userone14 ေလးကို ၀င်ေရာက်ဆဲဆုိ၊ အဲေလ..၀င်ေရာက် ဆိုဆံုးမဆရာြကီးလုပ်နုိင်ပါြပီ။ မသိသားဆုိးရွားတဲ့ ငမိုက်သားက ဉာဏ်ပညာရဲ့ကျယ်ြပန့်ေသာ တံခါး၀ကေန ေစာင့်ေနပါတယ်။ Hello Come on !!
(ေမး) ပိဋကတ်သံုးပံုကို ေစာင့်ြကပ်ေသာ သူရဿတီ မယ်ေတာ် အမှန်တကယ် ရှိ-မရှိနှင့် အကယ်၍ အမှန်တကယ်ရှိပါက သူရဿတီဂါထာအစစ်ကို ကျမ်းကိုး အေထာက်အထားနှင့် သိလိုပါသည်ဘုရား။
( ေမာင်ရဲ၀င်း-ေြမာက်ဥက္ကလာ )
(ေြဖ) သူရဿတီ-ဟူသည်မှာ အိန္ဒိယြပည် ေြမာက်ပိုင်း ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ြမစ်တခု၏ နာမည် ြဖစ်သည်။ ထိုြမစ်ကို ေရှးဟိန္ဒူ အာရိယန်များ အထွတ်အြမတ်ထားရာမှ ြမစ်ကို နတ်တပါး အေနြဖင့် ကိုးကွယ်လာြကေြကာင်း (ဣတ္ထိလိင် သဒ္ဒါ) ြမစ်-နဒီ မှ နတ်သမီးြဖစ်လာကာ သူရဿတီ ြမစ်သည် သူရဿတီ နတ်သမီး ြဖစ်၍လာေြကာင်း ြကာေသာ် ရိုးရိုးနတ်သမီးမဟုတ်ေတာ့ဘဲ ြဗဟ္မာြကီး၏ ဇနီး၊ နတ်ဘုရားမ တပါး ြဖစ်လာြပီး ၀ါစာ-စကားကို အစိုးရသည်၊ ကဗျာလကင်္ာ စာေပပညာတို့ကို ေပးစွမ်းနိုင်သည်၊ ေဗဒင်ကျမ်းတို့ကို ေစာင့်ေရှာက်သည်၊ အတတ်ပညာကို ေပးနိုင်သည်-ဟု ယူဆလာြကလျက် ယင်းတို့အတွက် ြဗဟ္မဏ၀ါဒီတို့က ပိုမို ကိုးကွယ်လာခဲ့ေြကာင်းြဖင့် မှတ်သားရပါသည်။
ထို့ေြကာင့် သူရဿတီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် လံုး၀မသက်ဆိုင်၊ ြဗဟ္မဏ၀ါဒီတို့ ဆိုင်ရာ နတ်သာြဖစ်သည်၊ ြဗဟ္မဏတို့၏ တန္တရ-မန္တရတို့ကို လက်ခံေသာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကလည်း သူရဿတီကို လက်ခံခဲ့သြဖင့် ေြမာက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အတန်ြကာကပင် သူရဿတီကိုးကွယ်မှု ရှိလာခဲ့သည်၊ နီေပါလ်ြပည်တွင် ယခုအထိ ဟိန္ဒူဘာသာ၀င်များနှင့် အတူ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များလည်း သူရဿတီကိုးကွယ်မှု ြပုခဲ့ေြကာင်း သိရသည်။
ြမန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တို့ အေနြဖင့် ပိဋကသံုးပံုေစာင့် မယ်ေတာ်ြကီးဟု ြဖစ်လာရသည်မှာ ဤသို့ြဖစ်ပါသည်။
သက္ကတအလကင်္ာကျမ်းကို အမှီြပု၍ သီဟိုဠ်ကျွန်း၊ အရှင်မဟာသံဃရက္ခိတ မေထရ်သည် သုေဗာဓာလကင်္ာရ (ပါဠိအလကင်္ာ) ကျမ်းကို စီရင်ရာတွင် သက္ကတအလကင်္ာကျမ်းက ၀ါဏီ-ေဗဒင် သံုးပံုေစာင့် သူရဿတီနတ်သမီးကို ရှိခိုးပဏာမ ြပုသကဲ့သို့ သရဏံ ပါဏိနံ ၀ါဏီ ၊ မယှံ ပိဏယတံ မနံ -ဟု ဘုရားစကားေတာ် ပိဋကတ်တည်းဟူေသာ သူရဿတီနတ်သမီးသည် အကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလံုးကို နှစ်သိမ့်ပါေစ-ဟု တင်စားသံုးလိုက်ေလသည်။
ထိုစကား အြမွက်ြဖင့်ပင် သူရဿတီသည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓနယ်ပယ်သို့ ေရာက်လာြပီးလှျင် ပိဋကတ်သံုးပံုကို ေစာင့်ြကပ်ေသာ သူရဿတီမယ်ေတာ်ဟူ၍ ြဖစ်လာရေတာ့သည်။ အမှန်အားြဖင့် ပိဋကတ်သံုးပံုကို မည်သည့် နတ်သမီး နတ်သား နတ်ြဗဟ္မာများမှ မေစာင့်။ ပိဋကတ်အာဇာနည် ဗုဒ္ဓသားေကျာ် ရဟန်းေတာ် သံဃာေတာ် များသာ ေစာင့်ြကပ်ေနပါသည်။ ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တို့ အေနြဖင့် သူရဿတီဂါထာတို့ကိုလည်း ရွတ်ဆိုေနရန်မလို၊ သူရဿတီဂါထာအစစ်ဟူ၍လည်း ဗုဒ္ဓစာေပ၌ မရှိ၊ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးမှ အြခားကိုးကွယ်ရာ မရှိပါ။
ကိုမိုးလား၊ မမုိးလားေတာ့ ြဖစ့် လိင်ေဖာ်ြပမထားေတာ့ မသိပါဘူး။ အခုလို စနစ်တကျ ြပန်ရှင်းြပထားတာကိုေတာ့ ေလးစားတယ်။ ေကျးဇူးလည်းတင်တယ်။ ကျေနာ့်အထင် မင်းကွန်းဆရာေတာ်ြကီးဟာလည်း ပိဋကတ်သံုးပံုကို ကျက်မှတ်အာဂံုေဆာင်စဉ်မှာ နုစဉ်အခါက ရွတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ သူရသာတီဂါထာကို နူတ်စွဲြပီး ရွတ်ဖတ်မိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ပိဋကတ်သံုးပံုကို အဲဒီေမာ်ဒယ်..အဲေလ။ အဲဒီမယ်ေတာ်ြကီး ေစာင့်တယ်ဆုိတာကိုေတာ့ ကျေနာ်လည်း လက်မခံနုိင်ပါဘူး။ သက်သက်လွတ်နဲ့ အသားစားြခင်းအေပါ် မှျတတဲ့အြမင်နဲ့ တင်ြပလာမယ့် ေနာက်ထပ် မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်က်ုိ ဒီေနရာကေန ဖိတ်ေခါ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုလင််းအူးေတာ့ မေရးပါနဲ့။ ထပ်ေြပာပါမယ်။ ကိုလင်းအူးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဘယ်သူမဆုိ ေရးနုိင်ပါတယ်။ ကျေနာ်ေလးစားစွာ ေစာင့်ေမှျာ်ေနပါ့မယ်။ ကိုလင်းအူးကို ဘာလို့မေရးေစချင်လဲဆုိတာ သိချင်ရင် သူ့စာကို အထပ်ထပ်ဖတ်ြကည့်ေစချင်ပါတယ်။ ဘာေလသံေပါက်ေနလဲဆုိတာ ရိပ်မိပါလိမ့်မယ်။ အားလံုးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် သိရှိနားလည် ကျင့်သံုးလာေအာင် ကူညီေပးလိုတဲ့အတွက် ကျေနာ့်ဘေလာ့ဂ်မှာ ေဖာ်ြပေပးချင်ပါတယ်။ ခွင့်ြပုေပးနိုင်-မနိုင်ကို အေြကာင်းြပန်ြကားေပးဖို့ ေမတ္တာရပ်ခံပါရေစ။
လွင်ေအာင်စိုး >>>>> ဟုတ်ကဲ့ပါ... ေဖာ်ြပနိုင်ပါတယ်..
ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် မည်သည့် ဘာသာသည် မေကာင်း၊ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာလှျင် အေကာင်းဆံုးဟုမေြပာပါ... ြကိုက်သည့် အရာနှင့် ြကိုက်သလို ေတွးေတာနိုင်ြကပါသည်။ သို့ေသာ် သင်သည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခံယူ ကိုးကွယ်ပါသလား။ ကိုးကွယ်သည်ဟုဆိုလှျင် မိမိ ယံုြကည်ကုိးကွယ်ေနေသာ ဘာသာမှ အြမင်တိမ်းကာ တလွဲထင် ကိုးကွယ်ေနမှုများ မြဖစ်ေအာင် ေရးသား တင်ြပရြခင်းြဖစ်သည်။ စာေပနယ်ပယ်၌ လမ်းလွှဲေအာင် ေရးသားေသာ စာေပများ၊ စာေရးဆရာများအား အသိေပးြခင်းြဖစ်သလို၊ ဘာသာေရးဘေလာဂ်ေရးသူများအေနြဖင့်လည်း သိရိှေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤေဆာင်းပါးသည် ဓမ္မရံသီ မဂ္ဂဇင်းတွင် ေဖာ်ြပ ပါရိှြပီးသားြဖစ်ပါသည်။
User >>> အေနြဖင့် ဤblog တွင် အစပိုင်း သူရဿတီနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ေသာမှတ်ချက်မျိုး ေရးခ့ဲသလဲ ဆိုတာ မှတ်မိပါရဲ့လား....။ ကျွန်ေတာ်၏ ေစတနာအား ကျွန်ေတာ့်၏ ြပင်ပ စာဖတ်ပရိတ်သက် သိ၏။ Blog စာဖတ် ပရိတ်သက် သိ၏။
ေကာင်းမွန်ေသာ ဘာသာေရးေဆွးေနွးမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ လှည့်ပတ်ကာ ေြပာဆိုေနသည်မှာ အင်မတန် ဆိုးရွားလှသည်။ မိမိဘေလာဂ်ေပါ်လာြပီး မိမိကို မေရးနှင့်ဟု ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ေရး အလွန်ဆန်ေသာ ေြပာဆိုမှုမျိုးပင်ြဖစ်သည်ဟု ေကာက်ချက်ချမိသည်။
ေစတနာသည် အကျိုးေပးပါမည်။ ေနာက်လည်း ဓမ္မရံသီ၊ ဓမ္မဗျူဟာ၊ သီလ၀ံ ဘာသာေရး မဂ္ဂဇင်းများတွင် ေရးသားထားေသာ မိမိ၏ ေဆာင်းပါးများအား ဆက်လက်ေဖာ်ြပ ေရးသားပါဦးမည်... ။ ေကျးဇူးတင်ပါသည်....
ကို user ခင်ဗျား...မမိုး မဟုတ်ပါဘူး...ကွျန်ေတာ့်နာမည် မိုးစက်ပါ.....email ကေတာ့ moeezett@gmail.com ပါ....
ဆရာေတာ်ရှင်ဆန္ဒာဓိကေရးထားတဲ့ သက်သတ်လွတ်နဲ့ ကုသုိလ်စိတ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဒီလိုေရးထားပါတယ်။
“အစားအစာတစ်ခုေြကာင့် လူတစ်ေယာက်မှာ ကုသိုလ်စိတ်လည်း ြဖစ်နိုင်သလို အကုသိုလ်စိတ်လည်း ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်ြဖစ်ေအာင် နှလံုးသွင်းြပီးစားရင် ကုသိုလ်စိတ်ြဖစ်နိုင်ြပီး အကုသိုလ်စိတ်ြဖစ်ေအာင် နှလံုးသွင်းြပီးစားရင် အကုသိုလ်စိတ်ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ အစားသက်သက်ေြကာင့် ကုသိုလ်စိတ် အကုသိုလ်စိတ် ြဖစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာကို စားသံုးသူရဲ့ နှလံုးသွင်းမှုေြကာင့်သာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ြဖစ်ေပါ်လာရတာပါ။ သက်သတ်လွတ်ပဲစားစား သက်သတ်မလွတ်ပဲစားစား၊ ဘာ၀နာတစ်ခုခုပွားရင်း စားရင်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဘာ၀နာတစ်ခုခုပွားစားရင်း စားေနသူရဲ့ သန္တာန်မှာ စားေနဆဲ အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ြပီး ေကာင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ ေလာဘ၊ မေကာင်းဘူးဆိုတဲ့ ေဒါသ ြဖစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက် အကုသိုလ်စိတ် ကင်းရှင်းေနပါတယ်။ မိမိပွားတဲ့ ဘာ၀နာနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွေနတဲ့ ကုသိုလ်စိတ် ြဖစ်ေနတဲ့အတွက် အစားစားရင်း ကုသိုလ်ရေနပါတယ်။
ေဒါသကိလာသာ ေလာဘစိတ်ေတွနဲ့စားေနရင် အကုသိုလ်စိတ်ေတွြဖစ်ေနပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်စားေနဆဲ အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အစာစားရင်း သူများအေြကာင်း၊ တစ်ြခားအေြကာင်း ေတွးလို့ပဲြဖစ်ြဖစ် ေလာဘ ေဒါသေတွ ြဖစ်လာရင်ေတာ့ အကုသိုလ်ေတွ ချည်းပါပဲ။
လူတစ်ေယာက်ဟာ သက်သတ်လွတ်အစာတစ်ခုကို စားေနတယ်ဆိုပါစို့။ ဟယ်အသားတုဟင်းေလးကရှယ်ပဲ ေကာင်းလိုက်တာ ဆိုြပီးေတွးရင် ေလာဘကိေလသာနဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ေတွ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဟွန်း ဒီေန့သက်သတ်လွတ်စားမယ်မှန်း သိလျက်နဲ့ ဟင်းကိုေကာင်းေကာင်း ချက်မထားဘူး၊ တစ်ခါလာလည်း ဒီကန်ဇွန်းရွက်ပဲ ဆိုရင် ေဒါသကိေလသာနဲ့ အကုသိုလ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဟင်း ငါမို့လို့ သက်သတ်လွတ် စားနိုင်တာ၊ ဟိုေကာင်မေတွဆို သက်သတ်လွတ် စားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုရင် မာနကိေလသာနဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ေတွ ြဖစ်ေနပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားမှ ေမတ္တာသမား၊ သက်သတ်လွတ်စားတာ ကုသိုလ်ရတယ်၊ ငါေတာ့ဒီေန့အေတာ်ေလး ကုသိုလ်ရသွားြပီဆိုရင်ေတာ့ ဒိဌိကိေလသာနဲ့ အကုသိုလ်ေတွြဖစ်ရပါတယ်။ ဒါကအစားအသာနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ေတွပါ။ သက်သတ်လွတ် အစားကိုစားေနရင် သူများအေြကာင်းေတွးြပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မစ္ဆရိယ ြဖစ်ေနမယ်ဆိုရင်လည်း အကုသိုလ်ေတွ တိုးပွားေနမှာပါပဲ။
သက်သတ်လွတ်အစာကို စားလိုက်ရံုနဲ့ လူတစ်ေယာက်ဟာ အလိုလိုေနရင်း ကုသိုလ်ေတွရမသွားပါဘူး။ ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စားမှ ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀နာတစ်ခုခုပွားများြခင်း၊ ေလာဘ ေဒါသစတဲ့ကိေလသာ မြဖစ်ေအာင် နှလံုးသွင်းနိုင်မှသာ ကုသိုလ်ရနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ “
ဆရာေတာ်ရဲ့အဲဒီအဆံုးအမဟာ အင်မတန် ြကိုးေြကာင်းဆီေလျာ်တယ်လို ့ကွျန်ေတာ်ြမင်ပါတယ်..ဒီလိုအေြကာင်းေတွကို သိြမင်ေတာ်မူလို ့သာ ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရားက သက်သတ်လွတ်စားြခင်း ကို ြမတ်ေသာအကျင့် တစ်ခုအေနနဲ ့ေသာ်လည်းေကာင်း..နိဗ္ဗာန်ေရာက်ေြကာင်းအကျင့် အေနနဲ့့ေသာ်လည်းေကာင်းမေဟာြကားခဲ့တာ လို ့ေကာက်ချက်ချမိပါတယ်...ထို ့ေြကာင့်..ကိုယ့်ရဲ့ေမတ္တာစိတ်အရင်းခံေြကာင့်ြဖစ်ေစ...ကုသိုလ်ရေြကာင်းအကျင့်ေကာင်းလို့ယံုြကည်လက်ခံလို ့ြဖစ်ေစ...လူအထင်ြကီးေစ လာဘ်လာဘရေစဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ေြကာင့်ြဖစ်ေစ...သက်သတ်လွတ်စားချင်တဲ့သူ စားနိုင်ပါတယ်...ဟုတ်တယ်ေလ သူများကိုထိခိုက်တဲ့ အလုပ်မှမဟုတ်တာပဲ..(ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာေတာင် ပိုလှျံလာနိုင်ေသး ) ဒါေပမယ့် ဘာသာ (ေထရဗုဒ္ဓ) ေရးနဲ့ေရာေထွးဆက်ယှက် မြမင်သင့်ဘူး ေရာေထွးဆက်ယှက် ေအာင်မြကိုးစားမလုပ်ေဆာင်သင့် ဘူးလို့ထင်ြမင်မိပါေြကာင်း ခင်ဗျား....
ဟယ်အသားတုဟင်းေလးကရှယ်ပဲ ေကာင်းလိုက်တာ ဆိုြပီးေတွးရင် ေလာဘကိေလသာနဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ေတွ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ...ကိုမိုးစက်ေရ အစ်ကို ြပန်တည်တင်ြပတဲ့ စာစုကလည်း အေတာ်ကိုကျုိးေြကာင်းသင့်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခုေဖာ်ြပသလို အသားဟင်းကို အာရံုကျြပီး သက်သက်လွတ်စားရမှာ မဝံ့ရဲတဲ့ သူေတွအတွက် ဘုရားရှင်ရဲ့အားမေပးမှုကို အေထာက်အထားြပု၊ လက်ကိုင်စွဲထားမယ့် အေနအထားရှိေနပါတယ်။ ဆုိလိုတာကေတာ့ဗျာ။ ဘာစားစားေပါ့။ အကုန်ဝါးတဲ့သူကလည်း သက်သက်လွတ်ချည်းစားတဲ့သူကလည်း အသားဟင်းပါစားတဲ့သူကို ငါ့လို မစားနုိင်ပါဘူးလို့ အသားလွတ်မာန်မတက်သင့်သလို၊ ဘုရားေဟာအတုိင်း တစ်လံုးတပါဒမကျန် လိုက်နာကျင့်ြကံေနသလိုလိုနဲ့ အသားဟင်းချည်း အာသာငမ်းငမ်းြကိတ်ေနသူေတွကလည်း သက်သက်လွတ်စားတဲ့ တကယ့်သူေတာ်စင်အချို့ကို မပုတ်ခတ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ြမင်မိပါတယ်။ ရယ်စရာေလးတစ်ခုေတာ့ ြမင်မိတယ်ဗျာ။ အသားဟင်းစားတဲ့ေနရာမှာေတာ့ ဘုရားစကားနားေထာင်ြပီး ဘီယာ၊ အရက်၊ စီးကရက်စတဲ့ စွဲလန်းြခင်း ဥပါဒန်ေတွကိုေတာ့ ဘုရားေဟာအတုိင်း မြဖတ်နုိင်တာကေရာ ဘုရားစကား တစ်ခွန်းမကျန်လိုက်နာသူေတွလို့ ဆုိနုိင်မလားဆုိတာေလးပါ။ ကိုယ်ြကိုက်တဲ့အရာကျရင် ဒါဘုရားေဟာေပါ့။ ကိုယ်မလုပ်နုိင်တာကျေတာ့ အင်း .. မသိချင်ေယာင်ေဆာင်ေနမှ..အဲလိုေပါ့ေနာ်။ ဟဲဟဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကိုမိုးစက်ကို ေကျးဇူးအမှန်ကန်တင်ပါတယ်။ ေနာင်လဲ ေရးသားပါဦး။ ကျေနာ်ေတာ့ ဉာဏ်ပညာတံခါးကိုဖွင့်ထားသေလာက် လွတ်လပ်ြပီးတရားမှျတတဲ့ ဘာသာတရားေအာက်မှာ ကျမး်စွဲ ဆရာစွဲေတွနဲ့ ဝါဒအစွဲေတွကိုင်ေရးေနသူေတွကို ဘာေြပာဦးမလဲဆုိတာ ေစာင့်ြကည့်ပါဦးမယ်။
ကို user ေရ...တကယ် ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ...ကွျန်ေတာ့်ကို ေကျးဇူးတင်တယ်ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူး..ကို user ဟာ ကွျန်ေတာ်နဲ့မတူတဲ့ေနရာမှာ ရပ်ေနေပမယ့် ငါ့စကားနွားရသမား မဟုတ်ပါလားဆိုတာ သိရလို ့ပါ... ကိုလင်းဦးနဲ့ကို user တို ့ရဲ ့ြကားထဲက အာဃာတ ေတွကို ကွျန်ေတာ် အြပည့်အစံုလည်းမသိဘူး စိတ်လည်းမဝင်စားပါဘူး...ဒါေြကာင့် ပုဂ္ဂိုလ်ေရးရနံ့မကင်းတဲ့ အေြပာအဆို အေရးအသားေတွ အေပါ်မှာေတာ့ြဖင့်ရင်..ကွျန်ေတာ် ဝင် comment ေပးမှာမဟုတ်ပါဘူး... တစ်ခုေလးေြပာချင်တာက...အမှန်ကိုသိတာနဲ့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ြကံ တဲ့ေနရာမှာ...သိတာကသိတာတစ်ပိုင်း ကျင့်တာကကျင့်တာတစ်ပိုင်း ဗျ...မသိပဲကျင့်ရင်..ဆင်ကန်းေတာတိုးဆိုသလို...မေရာက်သင့််တဲ့ေနရာေတွလည်း ေရာက်သွားမှာပဲ...အဲ..သိြပီးမကျင့်ရင်ေတာ့...ကိုယ်ေရာက်ချင်တဲ့ေနရာ မေရာက်ဘူးေပါ့ဗျာ...ဒီေတာ့ အေကာင်းဆံုးက အမှန်အတိုင်းလည်းသိရမယ်...သိတဲ့အတိုင်းလည်း ကျင့်ြကံနိုင်ရမယ်... ဒီ ၂ ခုမှာ...အမှန်အတိုင်းသိရမယ့် အပိုင်းက ပိုအေရးြကီးတယ်ဆိုတာကေတာ့ြဖင့် ြငင်းခံုစရာမရိှေလာက်ဘူး ထင်ပါတယ်...မကျင့် ့တဲ့သူကို ကွန်ေတာ်တို့က ရိုက်နှက် ြပီးကျင့်ခိုင်းလို ့မရဘူးဗျ...မသိေသးတဲ့သူေတွကိုကျေတာ့...ကိုလင်းဦးတို ့လို..ကို user တို့လို... အေတွးအေခါ်နဲ့ကေလာင်အင်အား ရိှသူေတွက...ဒီလိုစာေတွေရးြပီး...သိေအာင်လုပ်ေပးဖို ့ရာ လွယ်တယ်ေလ....အေရးြကီးတာက ဒီလိုလုပ်ေပးြကတဲ့ေနရာမှာ...ေစတနာေကာင်းေသာ်လည်း အမှန်တရား အမှန်အသိ ဆီကို ဦးတည်ေပးမိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ... ဒီေတာ့ဗျာ..ကိုယ်ေဖါက်ေပးလိုက်တဲ့လမ်းမှာ...နင်းေလှျာက်ြကမယ့်... ကိုယ့်ေလာက်ခွန်အားမရိှသူေတွ လမ်းမှားကိုမေရာက်ဖို ့ေတာ့...လမ်းေဖါက်တဲ့သူေတွမှာ တာဝန်ြကီးစွာ..ရိှေနပါတယ်...ဒီအသိကေလးမရိှရင်ေတာ့...ခင်ဗျားတို့ကွျန်ေတာ်တို ့မှာ...သံသရာဝန် ေလးလွန်းလှပါေြကာင်း........
ဟုတ်ကဲ့ မှတ်သား သွားပါြပီရှင်...
ြမန်မာြပည်က ဘာသာေရး အမည်ခံ စာေစာင်အချုိ့ကိုေတာ့ စိတ်ကုန်တာ အေတာ်ြကာပါြပီ..
ဘုရားေပါ်မှ ေြမွေတွထားတဲ့ ေဂါပက ေတွကိုလည်း စိတ်ကုန်တယ်ဗျာ..
ကိုလင်းဦးေရ မှတ်သားသင့်တဲ့အေြကာင်းအရာေတွကို ေရးသားေဖာ်ြပေပးတာေကျးဇူးပါ။
မိုးစက်ေြဖြကားေပးထားတာေတွကိုလည်းနှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ေလးအတွက်ေတာ့ အမှန်တကယ်ေကျးဇူး တင်ပါတယ်။
ကိုလင်းဦးေရ.. တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ...
ကျေနာ့်ဆီလည်းလာလည်ြပီး ေ၀ဖန် အြကံေပးေစလို ပါတယ်.. လိုအပ်တာများရှိရင်လည်း ြပုြပင်ေပးဖို့တုိက်တွန်းပါတယ်...
သာသနာေတာ် သန့်ရှင်းြပန့်ပွားဖို့အခုလို သတိေပးစာေလးေရးေပးတဲ့အတွက် သာဓုေခါ်သွားပါတယ်.. ကိုလင်းဦး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါေစ...